Ny Purism dia mampanantena traikefa tokana miaraka amin'ny PureOS ao amin'ny findainy Libraryem 5 | Avy amin'ny Linux
Ireo olona ao ambadiky ny tranomboky 5 ary izay tohanan'ny PureOS, dia naneho tamin'ny mpampiasa azy antoka momba ny Purisme omeo rafitra miasa namboarina izy ireo fa tsy ho tombontsoan'ny orinasa ara-bola fotsiny.
Ny orinasa aza dia mirehareha amin'ny heriny amin'ny alàlan'ny famatsiana ny hany tokana tetikasa tena izy miorina amin'ny fiarahamonina fa tsy maodely fitantanana Big Corp. Ankoatr'izay voalaza izany ny mpampiasa dia tsy mifamatotra amin'ny rafitra iray hahafahanao manala mora foana ny PureOS koa ary mametraka rafitra fiasa GNU / Linux hafa mifanentana amin'ny telefaona Libraryem 5 anao.
PureOS dia rafitra fiasa GNU / Linux miorina amin'ny Debian ary ankoatry ny loharano misokatra PureOS dia mampiditra tombony toy ny fiarovana, fiainana manokana ary fahalalahan'ny mpampiasa.
Raha miresaka fahalalahana, Purism dia nanosika ny fetran'ny fenitry ny rafitra maimaimpoany hatreto ka nahavita nampiditra PureOS tao anaty lisitra faran'izay bitika amin'ireo fizarana GNU / Linux folo "maimaimpoana" nankatoavin'ny Free Software Foundation (FSF).
Raha te-hiditra ao anatin'ity faribolana anatiny ity dia ilaina ny manaraka torolalana maromaro navoakan'ny FSF toy ny fampiasana fahazoan-dàlana malalaka, ny fandraràna ny fitarihana ireo mpampiasa hahazoana vaovao tsy maimaim-poana, tsy fampidirana ireo navigateur izay mampihatra ny EME , fampiantranoan-tena sns.
Ny teknolojia PureOS dia miorina eo an-tsoroky ny olona goavambe, vokatry ny injenieran'ny hendry am-polony taona maro ary ny fanamboarana ataon'ny vahoaka mahatsiaro kalitao - ny "desktops maimaimpoana", izay miahy ny fahaizan'ny teknika voalohany indrindra amin'ny toerana fisainana fohy. mba "hamoaka fampiharana haingana sy hampitombo ny tombom-barotra." PureOS dia mety haneho ny asa tsara indrindra omen'ny fiarahamonina "birao maimaimpoana" ho an'ny sehatry ny telefaona Libraryem.
Amin'ny lafiny fampiharana dia manantena ihany koa ireo mpandraharaha tsy miankina avy amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany hameno ny asanay voalohany amin'ny alàlan'ny famoronana ny fampiharana azy ireo manokana, ny fividianana fampiharana efa misy ary ny fanatsarana ny traikefa 'app store' amin'ny ankapobeny; ny sehatra Librem 5 sy ny PureOS dia maneho fiaraha-miasa iraisana amin'ny vondrom-piarahamonim-pampivelarana misimisy kokoa (tsy "loharanom-baovao misokatra ho an'ny famakiana fotsiny", fa fiaraha-miasa amin'ny rindrambaiko tena malalaka).
Manampy i Purism raha mampiasa PureOS ny mpampiasa tranokala 5, hahazo alalana amin'ny fanavaozana ny fiarovana maharitra ianao, fanatsarana ny fiainana manokana, fanamboarana bibikely sy fanasongadinana vaovao ary ny tena zava-dehibe dia ny fanavaozana izay tsy hanimba ny fahombiazan'ny finday, izany dia eo am-pofoana an'i Apple, izay tratra tamin'ny fampihenana ny fahombiazan'ny iPhones taloha heverina fa hitehirizana ny bateria sy ny fahombiazan'ny iPhones.
Tsy toy ny fanavaozana nomen'ny orinasa sasany izay mampihena ny androm-piainan'ny fitaovana na manimba ny zavatra niainan'ny mpampiasa, Mampanantena i Purism fa miaraka amin'ny PureOS, ny traikefan'ny mpampiasa dia ho toy ny "divay tsara". Rehefa ampiana ny fanavaozana ny endri-javatra sy ny fampiharana dia hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa izy io fa tsy handrava azy, hoy ny mpanamboatra telefaona.
Raha dinihina amin'ny fampanantenana natao tamin'ny PureOS dia azonao lazaina izany ity rafitra miasa ity dia manana ny zava-drehetra hitaona ny mpampiasa ary hahita fahombiazana izay tsy nahombiazan'ny Firefox OS, Ny rafi-piasan'ny finday open source an'i Mozilla, ary koa ireo rafitra loharano misokatra hafa dia tsy nahomby. Saingy na eo aza ny endrika manintona an'ny PureOS, tsy afaka nahazo toerana miaraka amin'ireo mpampiasa izany raha tsy nifindra ireo rindranasa malaza indrindra ary novolavolaina tamina rafitra ny rindranasa vaovao. Io no tsy hita tao amin'ny Firefox OS ary na ny rafitra tompona toa ny BlackBerry OS aza.
Mahafantatra an'ity olana ity ny Purism ka mamporisika ireo mpamorona tsy miankina amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany hamorona ny fampiharana azy ireo manokana, hifindra monina ny fampiharana misy azy ireo ary hanatsara ny traikefan'ny fivarotana fampiharana amin'ny ankapobeny.
Raha mahavita mandresy an'io zava-tsarotra naharesy na dia ireo tetikasa lehibe indrindra aza ny PureOS, ny Purism dia tsy maintsy hamaha olana maharitra izay mety ho tapaka amin'ny fanitarana ny PureOS: ny fisian'ny Libraryem 5. Raha ny tena izy, maro ireo mpampiasa manana nandidy ny tranomboky 5 nandritra ny taona maro, saingy mbola miandry ny fandefasana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny Purism dia mampanantena traikefa tokana miaraka amin'ny PureOS ao amin'ny finday tranokala 5 anao
Luciano Alonso placeholder image dia hoy izy:
Na olana iray hafa dia ny sandan'ny fitaovana. Lafo be. Ny fanafarana na any Brezila dia tsy mety, dolara lafo, abidy sns sns ... Afaka nividy im-betsaka aho, saingy noho io vidiny sarotra io.
Valiny tamin'i Luciano Alonso
Ireo mpitrandraka Chia dia mitsambikina an-dranomasina ary amidiny ny zava-drehetra